Windows 11 uye TPM. Sei zvisingafaniri kutishamisa? | Linux Vakapindwa muropa
Windows 11 uye TPM. Sei zvisingafaniri kutishamisa?
Ini ndinotanga nekuyambira kuti ndiri kuenda kuyedza kushivirira kwevaverengi nekutaura nezve Windows 11 chero bedzi vaparidzi veAddict Linux vanditendera. Iko kune mukati memahara software nharaunda hunhu hwekusafarira kana kuzvidza izvo zvinoitika mukati mekombuta indasitiri iyo, kune hukuru hukuru, inoitisa chokwadi chekuti proprietary software inoramba ichitonga pamusika.
1 Sei tichifanira kufarira Windows 11?
2 Windows 11 uye TPM. Tsananguro ine nhoroondo nhoroondo
Sei tichifanira kufarira Windows 11?
Kune rimwe divi, uye pasina kubvumirana nedzidziso dzekurangana, zviri pachena kuti denda rakashanda kuratidza nzira dzekutonga kwevanhu idzo dzaizotarisirwa kubva kuhudzvanyiriri kwete kubva kuhutongi hwakasimbiswa. Izvi zvinoita kugoverwa kwemahara kweruzivo, uye ne software inokwanisa kuiongorora, kuri kuwedzera kukosha.
Chii chinoitika neWindows 11 chakakosha kuLinux nyika nezvikonzero zviviri:
Iyo yakasimba Microsoft inoisa miganho pahunhu hwehumambo hweAmazon, Google neApple (uye zvinopesana)
Ichaona kana kambani ichine simba rekumisikidza zvinodiwa zvehardware.
Ndataura kanoverengeka (uye ndinotenda ndakazviratidza) kuti ini ndiri wepro-Microsoft wevanyori veLinux Vanodhakwa. Ndiri kublogi ino chinyorwa ndichishandisa iyo Linux vhezheni yeEdge browser, uye ini ndinowanzo nyora zvinyorwa pane nharembozha yeMicrosoft Office. Ini ndiri (was) mumwe wekutanga kurodha vhezheni dzekuvandudza dzeWindows
Izvi hazvireve kuti ndakatenga mune yenyaya yerudo yemahara uye yakavhurwa sosi software. Ini ndaigara ndichinzwisisa kuti waive muchato wekureruka. Vanokwikwidza veMicrosoft (kunyanya Google neAmazon) vanoshandisa iyo mukurwira kwavo chikamu chemusika naRedmond, saka kambani yaifanirwa kuitora. Chimiro changu chaigara chiri chimwe che tora mukana wezvavanotipa, asi tichiziva kuti makambani anogara ari makambani uye kuti zvinhu hazvingagare nekusingaperi.
Mukutaura ku chinyorwa changu chekare, muverengi Vicfagar anoratidza maonero angu zvirinani kupfuura zvandinoita:
… Kusaziva kwaSatya Nadella nekutenda kwakaipa kuchabhadhara Microsoft zvakanyanya. Iyi nyaya, kunyangwe iri imwe fomati, kuenderera kweBallmer kusvika pakurwiswa kwehardware. Mumakore aya chinangwa chake chete chave chekugadzira mari, masevhisi pamberi pehunyanzvi; chingwa chanhasi uye nzara yemangwana, uye isu tatova mune mangwana. Kuzvizivisa wega mutariri weGNU / Linux chinhu chisina musoro kana zvirongwa zvavo zvikafamba nekuti zvese zvinofanirwa kuitwa pasi pemirairo yavo pane yakavharwa Hardware. Ndiwo mukana wegoridhe wenyika yeGNU / Linux, asi ndinotya kwazvo kuti murume uyu anodonhedza bhurugwa rake kana kuti vachamuisa mumugwagwa pamberi pa2025.
Windows 11 uye TPM. Tsananguro ine nhoroondo nhoroondo
Nekudaro, kana tichienda kumabhuku enhoroondo, zano racho rinogona kuita musoro.
IBM pakutanga haina kutenda mumakomputa ega, yaifunga kuti zvaizokanganisa musika mainframe iyo yaitungamira. Paakafunga kuzviita, vakwikwidzi vake vaive pamberi pake kumberi. Vatungamiriri vayo vakasarudza kuti vanofanirwa kuve nemakomputa avo ekutanga pamusika mukati megore.
Senzira yekuzadzisa izvi, yakafunga kusiya mutemo wezvekuvandudza zvemukati uye, dzokera kuIntel neMicrosoft sevanopa microprocessors uye sisitimu inoshanda yePC yako. Mukuwedzera yakatora mutemo we "open architecture" (Gadzira zvirevo zveruzhinji paruzhinji) kufambisa kugadzirwa kweyechitatu-bato software.
Mukutaura chinhu chakashanda. IBM PC yakava indasitiri yakajairwa. Asi, mukudzoka Vagadziri vakaonekwa avo vakagadzira IBM zvishandiso uye vakakwanisa kumhanyisa chero software iyo yakamhanya mune yekutanga.
Nekuda kweizvozvo, IBM yakarasikirwa nevatengi, ukuwo, Microsoft neIntel vakaramba vachiita mari.. Microsoft yaive nehutongi hwehurongwa hwekushandisa, uye kunyangwe Intel yaifanira kupa rezinesi tekinoroji, kugona kwayo kwekuvandudza kwakapa iyo mukana kune vakwikwidzi vayo.
Sekureva kwevanoongorora indasitiri, Kukanganisa kweBM kwaive kuburitsa kunze uye kuita kuti kuvaka kuvhurike panguva imwe chete. Pamwe yaifanirwa kunge yakagadzira yayo Hardware, yakataurirana hwindo rekushandisa machipisi neIntel, kana kuwana huchenjeri hweanoshanda system.
MUNA 1987 IBM yakaedza kudzoreredza nekuunza iyo PS / 2 mutsara wemakomputa ako ane OS / 2 sisitimu yekushandira yakagadzirwa pamwechete neMicrosoft. But, it was too late. Muna 1990 Windows yaizoonekwa.
Microsoft haidi kudzokorora chikanganiso cheIBM. Zvakawanda uye zvakanyanya Hardware iri kuoneka iyo inoshandisa asiri-Windows anoshanda masystem. Zano rayo ndere kutora mukana pachinzvimbo charo chakakwirisa padesktop kumanikidza vagadziri kuti vagadzire zvigadzirwa zvinonetsa kuisa mamwe masisitimu anoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Windows 11 uye TPM. Sei zvisingafaniri kutishamisa?
Ini ndinotenda, mukati meruzivo rwangu rwakaganhurirwa, kuti izvi zvido zvekuchengetedza zvakanangana ne "gore" maPC pane kuchengetedzwa kwemusha kana mushandisi wemubatanidzwa.
Kana mune ramangwana chikamu cheOS chinomhanya mugore, kusanganisira zvakakosha zvinhu uye mafaira evashandisi, matanho ekuchengetedza aya akakosha.
Zviripachena kutonga pamusoro peiyo ruzivo paPC kwakasanganiswa, kusanganisira kudiwa kwekugara kwakabatana uye ndipo panogona kuva neLinux rakakura ramangwana.
Nhanho nhanho tinoenda kuWindows 365, uko iyo rese kambani network ichave iri chaiyo uye kunze kwekudzora kwekambani. Pasina makomputa masayendisiti anotonga netiweki asi kusanganisira kubhadhara muripo ... Hofisi 365 ndiyo yaive danho rekutanga.